बादल विरुद्ध उठेका खिललाल हाम्रा उम्मेद्वार होइनन् : पाण्डे ! « Bagmati Online
बादल विरुद्ध उठेका खिललाल हाम्रा उम्मेद्वार होइनन् : पाण्डे !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका खिमलाल देवकोटा आफूहरुको उम्मेद्वार नभएको बताएका छन् । उनले देवकोटालाई आफूहरुले उम्मेद्वार भएको भन्दा पनि प्रस्तावक माओवादी केन्द्र र समर्थक नेपाली कांग्रेस रहेको उल्लेख गर्दै केही मानिसलाई हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेको बताए ।
डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता पाण्डेले भने, ‘उहाँ (खिमलाल देवकोटा) हाम्रो उम्मेद्वार भन्दा पनि माओवादी केन्द्र प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेस समर्थक छ । केही मानिसलाई हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ कि भन्ने लागेको होला । तर त्यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नता केही पनि छैन ।’ के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरु छलफलका क्रममा नै रहेको भन्दै देवकोटाको विषयमा आफूहरु संगल्न नरहेको उनको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै जाँदा माधव नेपाल नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आफू निकट मानिन योजनाविद डा. खिमलाल देवकोटालाई राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यता एमालेले भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वारी बनाएको छ। माधव नेपाल समूहको समर्थन विना बादलले जित्ने संभावना न्युन थियो ।
अहिले माधव नेपाल समूहले उठाउँदै आएको मुद्दालाई सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली तयार भएपछि माधव नेपाल समूह बादललाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । देवकोटाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको र माओवादी प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेस समर्थक रहेको छ ।
नेता पाण्डेसँग गरिएकाे भिडियाे संवाद
प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छः वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा !